17 Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti: 2 “Taura nevanakomana vaIsraeri, utore kwavari tsvimbo imwe chete+ nokuda kweimba imwe neimwe yemadzibaba avo kumachinda avo ose,+ maererano nedzimba dzemadzibaba avo, tsvimbo gumi nembiri. Unyore zita romumwe nomumwe patsvimbo yake. 3 Unyore zita raAroni patsvimbo yaRevhi, nokuti pane tsvimbo imwe chete yomukuru weimba yemadzibaba avo. 4 Unofanira kudziisa mutende rokusanganira pamberi peChipupuriro,+ pandinogara ndichisangana nemi.+ 5 Zvichaitika ndezvokuti, murume wandichasarudza,+ tsvimbo yake ichatungira, uye ndichanyaradza kundigunun’unira+ kwevanakomana vaIsraeri, kwavari kukugunun’unirai.”+ 6 Naizvozvo Mosesi akataura nevanakomana vaIsraeri, uye machinda avo ose akamupa tsvimbo imwe chete nokuda kwejinda rimwe nerimwe, tsvimbo imwe chete nokuda kwejinda rimwe nerimwe, maererano nedzimba dzemadzibaba avo, tsvimbo gumi nembiri;+ uye tsvimbo yaAroni yakanga iri imwe yetsvimbo dzavo.+ 7 Mosesi akabva aisa tsvimbo dzacho pamberi paJehovha mutende reChipupuriro.+ 8 Zvino zuva rakatevera racho Mosesi paakapinda mutende reChipupuriro, tarira! tsvimbo yaAroni yeimba yaRevhi yakanga yatungira, uye yakanga ichibudisa tumapazi uye ichitumbuka maruva, ichibereka maarumondi akaibva. 9 Mosesi akabva abvisa tsvimbo dzose pamberi paJehovha, akaenda nadzo kuvanakomana vose vaIsraeri, vakatarira, mumwe nomumwe akatora tsvimbo yake. 10 Naizvozvo Jehovha akati kuna Mosesi: “Dzorera tsvimbo yaAroni+ pamberi peChipupuriro kuti ive chimwe chinhu chinofanira kuchengetwa kuti chive chiratidzo+ kuvanakomana vokupanduka,+ kuti kundigunun’unira kwavo kugume, kuti varege kufa.” 11 Mosesi akabva aita sezvaakanga arayirwa naJehovha. Akaita izvozvo chaizvo. 12 Zvino vanakomana vaIsraeri vakatanga kuti kuna Mosesi: “Zvino tichafa, tichaparara, isu tose tichaparara.+ 13 Ani naani anoswedera pedyo,+ anosvika pedyo netebhenekeri yaJehovha, achafa!+ Tofa here saizvozvo?”+